कसरी गर्छन् महिलाले ‘ह'स्त मै'थुन’ ? - नेपाली खोज
मेरो नाम हना हो र म ह स्त मै-थुन गर्छु । तपाईं गर्नुहुन्छ ? धेरै होइन । यद्यपि महिला ह स्त मै-थुनका सम्बन्धमा उति धेरै चर्चा हुँदैन । के उनीहरु खुलेर कुरा गर्छन् ? म २५ वर्षकी भएँ । मलाई याद छ कि पुरुषहरु विद्यालयमा ह स्त मै-थुनबारे खुलेर कुरा गर्थे । तर, केटीहरु ? स्पष्ट छ उनीहरुलाई यसको लागि स्वतन्त्रता छैन । यदि कुनै केटाले हामी सबैजसो केटीहरुलाई ह स्त मै-थुनको बारेमा सोधे भने हाम्रो जवाफ हुन्छ, ‘गरेको छैन, यो अ-श्ली ल हो ।’ हामी हस्तमै-थुन गर्नेले पनि जवाफ यस्तै दिने गर्छौं ।
जबकि यही प्रश्न कुनै केटालाई सोधियो भने उनले धक नमानी भन्नेछन्, ‘लुकाउने कुरा के छ र ? ह स्त मै थुन गर्छु ।’ यी जवाफहरुबाट के भेउ मिल्छ भने, महिलामा का-मुकता हुँदैन र यस सन्दर्भमा पुरुष अगाडि छन् । हस्तमै-थुन हा निकारक छ ? जो युवती ह स्त मै-थुन गर्छन् उनीहरु यस्तो कुरा गर्न लजाउँछन् । तर, पुरुषको हकमा यस्तो छैन । म त्यस्तै किशोरी थिएँ, जोसँग व्यवहारमा यी सबै हुन्छ । म मान्छु, मेरा कुनैपनि महिला साथीहरुले ह स्त मै थुन गरेनन् । त्यो उमेरमा त मैले पनि गरिन । म सोच्थे कि यो अ-श्ली ल हो, यसले मेरो गुप्तां-ग विकृत हुनेछ ।